Portal:Woqooyiga Ameerika/Maqaal xul ah - Wikipedia
Portal:Woqooyiga Ameerika/Maqaal xul ah
< Portal:Woqooyiga Ameerika
Portal:Woqooyiga Ameerika/Maqaal xul ah/1
Portal:Woqooyiga Ameerika/Maqaal xul ah/2
Portal:Woqooyiga Ameerika/Maqaal xul ah/3
Calanka Wadanka Meksiko wuxuu ka samaysan yahay sadex midab oo kala ah cagaar, cadaan, iyo casaan taasi oo badhtanka kaga taalo astaanta ciidanka qaranka.
Portal:Woqooyiga Ameerika/Maqaal xul ah/4
Wadanka Mareykanka wuxuu xonimadiisa ka helay gumeestihii Boqortooyadii Ingiriiska sanadka marka oo ahaa 1776ii, wakhtigaasi oo Mareykanku ka koobnaa 13gabol oo ku yaalay dhinaca bariga ee dalkaas.
Portal:Woqooyiga Ameerika/Maqaal xul ah/5
Portal:Woqooyiga Ameerika/Maqaal xul ah/6
Barack Xuseen Obama (US i/ˈrɑːk huːˈseɪn oʊˈbɑːmə/; Af-Ingiriis: Barack Husein Obama; Af-Carabi: باراك أوباما; wuxuu dhashay Ogosto 4, 1961) waa siyaasi isla markaana aha madaxweynihii 44 ee dalka Mareykanka , iyo qofkii ugu horreeyey ee Afrikan Ameerikan ah ee xilkaas qabta wuxuu ku dhashay Honolulu jasiiradaha Hawaii. Obama wuxuu ka qalin jabiyey jaamacadda Columbia University iyo dugsiga garsoorka jaamacadda harvard Harvard Law School, halkaasuu kasoo noqday madaxa Harvard Law Review.
Barack Obama waa nin dhalinyar ah oo aad u xargo badan ahna madaxweyna USA dadiisuna waa 47 jir. Waxa uu ku dhashay gobolka Hawaii bishii Juli 27 teedii, Sanadkii 1961 dii. waxaa iska dhalay Aabe dadka madow ah oo ka yimid wadaka Kenya iyo hooyo dadka cadaanka ah oo ka soo jeeda Gobolka Kansas ee wadanka Maraykanka Isaga iyo Afadiisa Michelle Obama, waxa ay leeyihiin laba gabdhood oo la kala yiraahdo Malia iyo Sasha Aabbihii waxa uu ka tagay isaga oo laba sano jir ah si uu waxbarashadiisa uga sii wato jaamacada Harvard. Kaddibna waxa uu dib ugu laabtay dhulkii uu ka yimid ee Kenya.
Portal:Woqooyiga Ameerika/Maqaal xul ah/7
Jikaago (loogu dhawaaqo i/kɑːɡoʊ/ ama /kɔːɡoʊ/) waa caasimada sadexaad ee ugu dadka badan wadanka Maraykanka. Magaalda Jikaago waa deegaanka ugu dadka badan gobolka Illinois iyo deegaanka "Midwest", taas oo leh shacab dhan 2.7 milyan. Dhinaca kale, marka la isku daro magaalada Chicago iyo nawaaxigeeda, taasi oo loo yaqaano "Chicagoland", waa deegaanka sadexaad ee ugu wayn wadanka Maraykanka, waxaana degan dad ka badan 10 milyan. Shikaago waxaa la aasaasay sanadkii 1837kii, laakiin waxay aad u kortay horaantii qarnigii 19aad. Horumarka iyo koritaanka magaalada waxaa aad uga qeyb qaatey harta Great Lake iyo webiga Mississipi. Shikaago waa fadhiga dowlada "Cook County" ee ugu weyn gobolka Illinois. Maanta magaalada Shikaago waa xarun weyn oo ganacsi, dhaqaale, warshado, shirkado, teknoolojiyad, isgaadhsiin, iyo gaadiid; waxayna leedahay Gegada diyaaradaha O'Hare ee caalamiga ah (" O'Hare International Airport") kaasi oo ah gegada diyaarada ugu weyn ee caalamka oo dhan. Sidoo kale, caasimada Shikaago waxaa ku yaala wadooyinka (highways) iyo wado-tareenka (railroads) ugu waaweyn wadanka Maraykanka. Sanadkiii 2014ka waxaa loo aqoonsaday magaaladan ineey tahay caasimada 14aad ee ugu weyn caalamka, tan 7aad ee ugu dhaqaalaha badan, iyo tan sadexaad ee ugu lacagta badan wadanka Maraykanka ayada oo heeysata ama maamusha lacag dhan 571 bilyan dollar.
Portal:Woqooyiga Ameerika/Maqaal xul ah/8 Portal:Woqooyiga Ameerika/Maqaal xul ah/8
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Portal:Woqooyiga_Ameerika/Maqaal_xul_ah&oldid=166371"
Last edited on 12 Febraayo 2017, at 12:13